Kubuye udumo lakudala bethula iPeugeot 308 | Bayede News
Home/ Ezezithuthi/Kubuye udumo lakudala bethula iPeugeot 308
Kubuye udumo lakudala bethula iPeugeot 308
AKUYONA into ethusayo ezinkampanini zezimoto ukuthi zidume kakhulu ngesikhathi esithile ngenxa yohlobo lwezimoto ezisuke zizikhiqiza ezithandwa ngabantu, kodwa zibuye zicwile zehlelwe nawudumo ngenxa yokuqina komncintiswano oqhamuka nezinye izinkampani.
Okungenze ngafi kelwa yile nkulumo yithuba engilitholile lokuvivinya iPeugeot 308 okungenye yezimoto eyabe iyintandokazi esitebeleni sakwaPeugeot eminyakeni edlule. KwaPeugeot balubuyisile udumo lwabo nge-308 entsha esihlukile kusuka phansi kuya phezulu uma uyiqhathanisa nendala.
Ngisho kwaPeugeot bayavumelana nami ngokuthi ngokwethula i-308 kufana nokubhala kabusha umlando omdala futhi omude wale ntandokazi yemoto. Ngesikhathi ngiyibona okokuqala ngamehlo enyama, bekungelula ukukholwa ukuthi i-308 uma ungakawubona umbhalo ofakazela lokho ngemuva nophawu olungaphambili.
IPeugeot 308 yakamuva iqoqene yathi ayithathe ezimotweni eziningi ezikhona. Okunye engikuqaphelile ukuthi ayisandlalekile njengakuqala okuyinika lowo muzwa wokuba yisporty. Igrille yayo ngaphambili nophawu lweminyaka lakwaPeugeot lwebhubesi ngezinye zezinto ezenza ungadideki ngokuthi iphuma kulo mndeni. Amalambu ayo aneLED ayenza yehluke kwezinye emgwaqeni.
Ibhonethi nezinhlangothi zishaya ngengcwephelezi yecriss okuyikhona okugqamile okuyenza yehluke ngazo zonke izindlela kwendala.
Amalambu amakhulu angaphambili axhumene ne- LED running lights okwenza ukuthi igqame ubusuku nemini ngamalambu ayo ongakwazi ukucosha ngisho inayiti.
Izinhlobo ze-308 zihlukene kabili kodwa zinezinjini ezilinganayo ezili-1.2 litre PureTech Turbo. Umehluko usekutheni kukhona ezishintshayo neshintshwayo. Esibe nethuba lokuyivivinya i-Allure 1.2 litre PureTech Turbo Auto ekhiqiza amandla afi nyelela ku-96kW.
Ngaphakathi akukho okutheni okuhlaba umxhwele ngoba ngiyibone ithule nje futhi impumpununu. Ayidlile kakhulu ngobuxhakaxhaka bamabhathini njengezimbangi zayo zaseSouth Korea, kodwa imfi hlo yayo ingaphakathi.
Angikusho ukuthi ngakwezobuchwepheshe izinga layo liphezulu. Isiteringi sakhona esincane esiphenduka kalula sengeza ubuhle.
Udashboard nengaphambili bakwenze kwaqondana nomshayeli okwenza amehlo angasuki emgwaqeni ngoba efuna ukufi nyelela emabhathinini athile. Iphuma nescreen esili-9.7 inch okwazi ukuxhuma iselula iveze konke okuqukethwe kuyo. Ezinye izinto ongakwazi ukuzixhuma iMirrorlink®, i-Apple CarPlay™ ne-Android Auto. Itouchscreen yakhona isebenza kalula ngokuchofoza usebenzisa umunwe. Lapha ungakwazi ukuthola ulwazi oluningi njengebanga elisele imoto esazolihamba ngophethroli okhona, i-airconditioner ixhunywe kuyo, icruise control nesimo sonke semoto.
Ngakwezokuphepha balinyusile izinga kuPeugeot 308 Allure njengoba iphuma ne-Attention Alert, i-Advanced Breaking System (ABS), i-Electronic Stability Program (ESP) neTraction Control System (ASR), i-Electronic Brakeforce Distribution (EBFD), i-Emergency Brake Assist (EBA) ehambisana nokuthi uma imoto ibamba amabhuleki ngokushesha izishaye amahazard ukuze imoto eza ngemuva ikwazi ukubona, okunye ephuma nakho i-automatic driveaway locking, icentral locking, i-anti-theft alarm nesuper locking systems. Uma kuhleli izingane ngemuva awubi nakancane ukwesaba ngoba iphuma nechild lock, iyakuxwayisa uma amabhande engafasiwe bese ivala nge-ISOFIX.
Le Peugeot 308 isingeyesizukulwane sesibili isisindo sayo sehle ngama- 140kg uma iqhathaniswa nendala. Isisindo sayo esincane sihambisana nokonga uphethroli, ijubane ngoba nasemgwaqeni iyashibilika ilekelelwa injini yayo esebenzisa uphethroli yohlobo lwePureTech.
Le njini akubuzwa ukuthi ithembekile ngoba isinqobe umklomelo wokuba Injini Yonyaka amahlandla amane iminyaka ilandelana. Ijubane layo eliphezulu ligcina kuma-204km/h futhi nasemgwaqeni iyasukuma futhi okuhle ngayo ukuthi ayizweli nakuphethroli ngoba ngebanga le-100km idla amalitha aphakathi kwe-5.0 ne-6.5.
308 Allure 1.2 PureTech Turbo96kW Auto – R369 900
308 Allure 1.2 PuteTech Turbo 96kW Manual – R334 900